सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युट्युव आदिका प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । जसरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् त्यसरी नै सामाजिक वा पारिवारिक विकृति बढिरहेका पनि छन् । यसकै माध्यमबाट ठूलाठूला अपराध पनि भइरहेका छन् । तर के सामाजिक सञ्जाल खराब प्रयोजन वा गलत काम गर्नकालागि मात्रै हो त ? के यसको माध्यमबाट राम्रा काम हुँदैनन् र भएका छैनन् ? यी प्रश्न पनि मनन गर्न आवश्यक छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुलाई कतिपयले मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयले व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्ने माध्यम, साथीभाइ भेटघाट गर्ने माध्यम, सिक्ने वा सिकाउने माध्यम, जीवनशैली परिवर्तन गर्ने माध्यम, करियर विकास गर्ने माध्यम वा समाजसेवाको माध्यम पनि बनाएको पाइन्छ । कसैले च्यारिटीको रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर हजारौं मानिसको दुःखमा मल्हम लगाउने काम पनि गरेका छन् । यो भनेको आ–आफ्नो रुची र क्षमताको कुरा पनि हो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटक निकै चर्चित बनिरहेको छ । टिकटककै माध्यमबाट धेरै प्रयोगकर्ताहरु अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने धेरै जना सेलिब्रेटी पनि बनेका छन् । त्यसैगरी कतिपयले लाखौं रुपैयाँसम्म टिकटकबाटै कमाएका उदाहरण पनि छन् । यिनै मध्येका एक टिकटक प्रयोगकर्ता हुन् ‘श्रीराम पौडेल’ ।
श्रीराम पौडेल पेशाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हुन् । उनी पनि टिकटकलाई मनोरञ्जनको साधन मान्थे । लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म पनि उनको त्यहि धारणा थियो । लकडाउनमा फुर्सदिलो भएर घरमा बस्दा उनले मनोरञ्जनकै लागि टिकटक खाता खोले । त्यहाँ अरुले जसोजसो गर्छन् उनले पनि त्यसै त्यसै गर्दै छोटा र रमाइला भिडियो राख्न थाले । उनको टिकटक चलाउनुको एकमात्रै उद्देश्य मनोरञ्जन लिनु र दिनु मात्रै थियो ।
तर जब चलाउँदै गए उनले त्यसैमा अनेकौं सम्भावना देखे । टिकटक मनोरञ्जनको लागि मात्रै होइन रहेछ भन्ने बुझे । उनी भन्छन्, ‘टिकटकमा अनेकौं सम्भावना हुँदा रहेछन् । एउटा त साथीभाइहरुसँग जोडिन, कुराकानी गर्न, रमाइलो गर्न पाइयो । अर्को कुरा आफ्नो व्यवसाय वा व्यक्तित्व विकास गर्न पनि पाइयो । तेस्रो कुरा, आर्थिक आम्दानी पनि गर्न पाइयो ।’
हो यिनै तीन कुरा देखेपछि अहिले टिकटकका एक्टिभ युजर बनेका छन् पौडेल । उनले टिकटक खाता खोलेको लगभग चार महिना मात्रै हुँदैछ । तर यो अवधिमा उनका करिब साढे अठार लाख फलोअर भइसकेको छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले यसबाटै असी हजार भन्दा बढि नगद आम्दानी पनि गरिसकेका छन् ।
टिकटकबाट आम्दानी पनि हुन थालेपछि उनले अर्को फरक सोच बनाए त्यो हो, ‘टिकटकको कमाई सामाजिक सेवामा लगाउने’ । उनले भने, ‘टिकटकबाट जति आम्दानी हुन्छ त्यो रकम गरीब, दुःखी र पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन प्रयोग गर्छु ।’ टिकटकबाट पनि त्यत्तिकै कमाई हुने होइन । यसमा समय, क्रियटिभिटी र प्राविधिक ज्ञान पनि खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
यो लगानीबाट आम्दानी भएको रकम उनले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि नभई सामाजिक सेवाको लागि खर्च गर्ने अर्को आदर्श भाव प्रस्तुत गरे । जसको फलस्वरुप उनले पहिलो पटक आम्दानी गरेको करिब ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामाखुसी स्थित मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरे ।
पौडेलले शनिबार बिहान मानव सेवा आश्रममा पुगेर आफ्नै हातले ती खाद्यसामग्रीहरु हस्तान्तरण गरे । उनले चामल, दाल, तेल, मरमसला, चिउरा, सोयाविन लगायतका खाद्यसामग्रीहरु आश्रमलाई दिए ।
उनले दिएको खाद्यान्नले आश्रमका ४१ जना आश्रितलाई एक महिना पुग्ने आश्रमका सञ्चालन सहयोगी सानु गुरुङ्गले बताए । आश्रम सहयोगी दाताहरुकै सेवाभावले चलेको छ । पौडेल जस्तै दाताहरुले दिएको सहयोगले यहाँका आश्रितहरुको गुजारा चलिरहेको छ । अन्य दाताहरुसँग पनि आश्रम सञ्चालक यस्तै सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्छन् ।
उनले यसअघि पनि सेवा भावको काम नगरेका भने होइनन् । बालाजु जेसिजको संस्थापक अध्यक्ष साथै नेपाल जेसीजका पुर्व महासचिव समेत रहेका उनले विभिन्न संघ, संस्थामा आवद्ध रहेर वा नरहेर पनि पटक पटक सहयोग गर्दै आएका छन् । तर जति यसअघि सहयोग गरे त्यो भन्दा अहिलेको सहयोग विशेष र महत्त्वपूर्ण लागेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘मनोरञ्जनका लागि सुरु गरेको टिकटकबाट असहायको सहयोग गर्न पाउँदा निक्कै खुसी लागेको छ ।’
सामाजिक सञ्जाललाई विकृतिको रुपमा मात्रै बुझ्न नहुने र गलत प्रयोग गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘जीवनशैली परिवर्तन, व्यक्तित्व विकास, करियर डेभलपमेन्ट र समाज परिवर्तनको माध्यमको रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ‘गलत प्रयोगले न तपाईंलाई फाइदा पुग्छ न त समाजलाई ।’ सामाजिक सञ्जाललाई गलत रुपमा प्रयोग नगर्न र सकिन्छ भने समाज सेवाको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न उनी सुझाव पनि दिन्छन् ।
पाैडेललाइ यस कार्यमा टिकटकर मनिता पाैडेल, निताता, स्वनिम र श्वेता वाग्लेले सकृय रूपमा सहयाेग गरेका थिए । यसैगरी बिनाेद पण्डित, किरन पन्त, सारङ्गि वासुरि, महेश पाण्डे, इट्मि सरिता, साेनिया बिष्णु, बिस्राज, बिजयजंग पाण्डे, चन्दिका, भाइरल कुमार पटेल, रेन्डमराज, निरू, प्रशान्त, काराते भुपाल, पारस थापा, सम्जना, साेफिलगायतका टिकटकरले पनि टिकटकमा उपहार प्रदान गरेर सहयाेग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २०, २०७७ १०:५५